De Gea oo amaan huwiyey Eric Bailly – Gool FM
De Gea oo amaan huwiyey Eric Bailly
Kaafi September 8, 2016
(Manchester) 08 sebt 2016. Goolhayaha Manchester United David de Gea ayaa amaan ugu qubeeyey daafaca saameynta ba’an ku yeeshay Old Trafford, Eric Bailly.
Gaashaanka da’da yar waxa ay United xagaagan £30m uga soo qaadatay Villarreal, durba bandhigyadiisa soo jiidasho ayey ka qaadeen dadka la xiriira United isaga oo wada dheelay saddeddii kulan ee Premier League.
“Aah, Bailly waxa uu ahaa saxiix wanaagsan,” ayuu De Gea u sheegay Daily Mail.
“Eric wuu yimi dhamaanteenna wuu naga yaabsaday. Waxaan xusuustaa markii ugu horreeyeysay ee aan England imi, wey adkaan kartaa bilowga laakiin isaga horuu kala qabsaday.
“Waa mid jirka ku ciyaari, quwad leh, farsamo aadna u dheereeya. Ingiriisi yar ayuu ku hadlaa laakiin waxaan haysanayaa kuwo badan oo Spanish-ka ku hadla dabcan Paul Pogba waxa uu ku hadlaa French-ga.
“Waa mid joogidiisa wanaagsan tahay marka aan is taago afka laga soo galo garoonka oo aan gadaasheyda eego, waxa uu ka mid yahay kuwa dhawrka ah ee waa weyn, ciyaaryahano badan oo awood badan sida Pogba iyo Zlatan Ibrahimovic, taas wax ay na siineeysaa muqaal dhab ah iyo joog xili ciyaareedkan.”
Marotta: Paul Pogba si khasab ah ayuu uga tahay Juventus
Steven Gerrard oo Leicester City ku tilmaamay "Dabaalo" (Muuqaal)